Ch 6 Mark – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Marka / Ch 6 Mark
6:1 Ary niala teo, dia lasa nankany amin'ny taniny; ary nanaraka Azy ny mpianany.
6:2 Ary rehefa tonga ny Sabata, dia nampianatra tao amin'ny synagoga. ary maro, rehefa nandre azy, talanjona tamin'ny fampianarany, nanao hoe:: "Aiza no mahazo ity iray ity izany rehetra izany?"Ary, "Inona izany fahendrena, izay nomena azy?"Ary, "Toy izany asa mahery, izay niasa tamin'ny tanany!"
6:3 "Tsy io ve ilay mpandrafitra, ny zanak'i Maria, ny rahalahin'i Jakoba, ary Joseph, ary Joda, ary Simon? Tsy ny anabaviny koa etỳ amintsika?"Ary nony niara-be tafintohina taminy izy.
6:4 Ary hoy Jesosy taminy:, "Misy mpaminany tsy hajaina, afa-tsy eo amin'ny taniny, ary tao an-tranony, ary eo an-nahaterahanao. "
6:5 Ary izy tsy afaka hanao na fahagagana tao, afa-tsy ny vitsivitsy nanasitrana ny marary amin'ny alalan'ny nametra-tanana taminy.
6:6 Ary izy nanontany tena, noho ny tsy finoany, ary dia nandeha tao an-tanàna manodidina, fampianarana.
6:7 Ary Jesosy niantso ny roa ambin'ny folo lahy. Ary izy vao naniraka azy tsiroaroa, ka dia nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto.
6:8 Ary nandidy azy ireo tsy haka na inona na inona ho ny dia, afa-tsy tehina: tsy misy mpitety kitapo, -kanina, ary tsy manam-bola fehikibo,
6:9 Fa asio kapa ny tongotrareo, ary tsy mba manao akanjo roa.
6:10 Ary hoy Izy taminy:: "Isaky ny efa niditra tao an-trano, dia mitoera ao mandra-pialanareo amin'izany toerana.
6:11 Ary na zovy na zovy no tsy handray anareo, na hihaino anao, rehefa hiala avy teo, dia ahintsano ny vovoka ho afaka amin'ny tongotrareo ho vavolombelona miampanga azy. "
6:12 Ary nivoaka, izy ireo nitory, ka dia olona mibebaka.
6:13 Ary demonia maro no navoakany, ary dia nanosotra ny marary maro ny diloilo ka nahasitrana azy.
6:14 Ary nahare izany Heroda mpanjaka izany, (ho an'ny anarany nanjary malaza) ka hoy Izy:: "Jaona Mpanao-batisa efa nitsangana indray tamin'ny maty, ary noho izany, fahagagana ireo asa lehibe ireo. "
6:15 Fa ny sasany:, "Noho izany Elia." Misy koa ireo nanao hoe:, "Satria izy dia mpaminany, toy ny anankiray amin'ny mpaminany. "
6:16 Ary nony nandre izany Heroda, hoy izy:, "John izay notapahiko ny lohany, izany efa nitsangana indray tamin'ny maty. "
6:17 Fa Heroda ihany no naniraka hisambotra John, ary efa mifatotra azy tany am-ponja, noho ny amin'i Herodiasy, ny vadin'i Filipo rahalahiny; fa nanambady azy izy.
6:18 Fa Jaona efa nilaza tamin'i Heroda, "Tsy Diso ianao, raha manambady ny vadin'ny rahalahinao."
6:19 Ary Herodiasy namorona sain-fitaka azy; ary nitetika ny hamono azy, nefa izy tsy afaka.
6:20 Fa Heroda natahotra an'i Jaona, mahalala Azy mba ho marina sy masina izy, ary izany dia niambina azy. Dia reny fa efa nahavita zavatra maro, ary noho izany dia nihaino azy an-tsitrapo.
6:21 Ary raha nisy fotoana efa tonga, Heroda nanao fanasana tamin'ny tsingerintaona nahaterahany, ny mpitondra, ary ny tribunes, ary ny voalohany ho mpanapaka Galilia.
6:22 Ka niditra ny zanakavavin'i Herodiasy ny iray ihany dia niditra tao, ary nandihy, ary nahafaly an'i Heroda, miaraka amin'ireo izay nipetraka nihinana teo aminy, hoy ny mpanjaka-drazazavavy, "Angataho amiko izay rehetra tianao, fa Izaho no hanome azy ho anao. "
6:23 Dia nianiana taminy, "Na inona na inona izay mangataka, Dia homeko ho anao, na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakako aza. "
6:24 Ary nony efa nivoaka, hoy izy tamin-dreniny, "Inona no mangataka?"Fa ny reniny:, "Ny lohan'i Jaona Mpanao-batisa."
6:25 Ary niaraka tamin'izay dia, nony efa niditra faingana ho any amin'ny mpanjaka, dia nangataka taminy, nanao hoe:: "Tiako raha homenao ahy faingana ny lohan'i Jaona Mpanao-batisa an-dovia."
6:26 Ary ny mpanjaka nalahelo indrindra. Fa noho ny fianianany, ary noho ireo izay nipetraka tao aminy nipetraka nihinana, dia tsy vonona ny handiso fanantenana azy.
6:27 Noho izany, dia naniraka mpiambina, dia nandidy fa ny lohany ho nentina an-dovia.
6:28 Ary notapahiny tao an-tranomaizina, ary dia nentiny ny lohany an-dovia. Dia nomeny an-drazazavavy, ary razazavavy kosa dia nanome azy an-dreniny.
6:29 Ary rehefa nandre ny mpianany momba izany, dia tonga ka naka ny fatiny, ka naleviny tao am-pasana.
6:30 Ary ny Apostoly, niverina tany i Jesosy, nilaza taminy izay rehetra efa nataony mbamin'izay nampianariny.
6:31 Ary hoy Izy taminy:, "Mandehana avy irery, any an-efitra toerana, ka mialà sasatra vetivety. "Fa nisy maro izay ho avy, ary nandeha, fa izy ireo dia tsy manana fotoana na dia hihinana.
6:32 Ary niakatra an-tsambokely, dia lasa nankany an-efitra toerana ihany.
6:33 Ary nahita azy mandeha lasa, sady betsaka no nahalala ny momba izany. Ary niara-nihazakazaka izy ireo-tongotra avy amin'ny tanàna rehetra, ary dia tonga teo anoloany.
6:34 Ary Jesosy, mandeha mivoaka, nahita vahoaka betsaka. Ary nandray fo azy, fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandry, dia nampianatra azy zavatra maro.
6:35 Ary rehefa efa ora maro izao no lasa, ny mpianany nanatona Azy, nanao hoe:: "Izao no iray toerana foana, ary ny ora izao hariva.
6:36 Alefaso azy, ka ny mivoaka sy ny tanàna teo akaiky teo tanàna, mba hividy sakafo ho an'ny tenany hanina izy. "
6:37 Sy ny fandraisana andraikitra, dia hoy izy taminy, "Omeo zavatra hohanina ny tenanareo." Ary hoy ireo taminy:, "Andeha isika ho any ka hividy hanina ho denaria roan-jato, ary dia homenay azy hohaniny. "
6:38 Ary hoy Izy taminy:: "Firy ny mofo any aminareo? Andeha, izahao. "Ary rehefa nahita avy, hoy izy ireo, "Five, sy hazandrano roa. "
6:39 Ary nandidy azy ireo hanao azy rehetra mipetraka an-teo amin'ny ahi-maitso.
6:40 Dia nipetraka an-tokony zato sy antokony dimam-polo avy.
6:41 Ary rehefa nandray ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, eto mijery ny any an-danitra, dia nitso-drano dia novakiny ny mofo, ary dia natolony ny mpianany mba harosony eny anoloan'ny olona. Ary ny hazandrano roa nozarainy tamin'ny olona rehetra.
6:42 Dia nihinana izy rehetra ka voky.
6:43 Ary izy ireo niara-nitondra ny sisa: roa ambin'ny folo harona moa no sombintsombiny sy ny trondro.
6:44 Ary izay nihinana dia dimy arivo lahy.
6:45 Ary avy hatrany dia nampirisika ny mpianany mba hiakatra an-tsambokely, ka dia mba hialoha azy nita ny ranomasina ho any Betsaida, -pandràvany ny vahoaka.
6:46 Ary rehefa nalefany izy ireo, dia nankany an-tendrombohitra hivavaka.
6:47 Ary nony maraina ny tara, ny sambokely teo ampovoan'ny ranomasina ny, ary Izy irery ihany no teo an-tanety.
6:48 Ary nahita azy ireo sahirana nivoy, (fa notohain'ny rivotra azy,) ary tokony ho tamin'ny fiambenana fahefatra amin'ny alina, dia nankeo amin'izy mivady, nitsangantsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary nikasa handalo azy.
6:49 Ary rehefa hitany nitsangantsangana tambonin'ny ranomasina, Nihevitra izy ireo fa zavatra hafahafa iny, dia niantso izy.
6:50 Fa izy rehetra samy nahita Azy, ka dia tena sahiran-tsaina. Ary niaraka tamin'izay dia niteny taminy, ary hoy izy taminy: "Hahazo hery amin 'ny finoana. Izaho. Aza matahotra."
6:51 Ary niakatra teo an-tsambokely aminy, ary dia nitsahatra ny rivotra. Ary vao mainka gaga-pony ireo.
6:52 Fa izy ireo tsy nahafantatra ny momba ny mofo. Ary ny fony efa jamba.
6:53 Ary nony tafita, dia tonga tany amin'ny tany Genesaret, ary dia tonga ny amoron-dranomasina.
6:54 Ary rehefa Nigadona avy amin'ny sambo, ny olona nahalala an'i Jesosy avy hatrany.
6:55 Ary nihazakazaka nanerana ny faritra manontolo, dia nanomboka nitondra ny fandriana izay nanana aretina, any amin'ny toerana efa reny fa izy no ho.
6:56 Ary eo amin'ny toerana handefasana dia niditra, ao amin'ny tanàn-dehibe, na tanàna kely na tanàn-dehibe, dia napetrany ny osa eo amin'ny arabe lehibe, ary dia niangavy taminy mba hanendry na dia ny somotraviavin-dambany. Ary izay rehetra nanendry azy dia natao salama.